अन-पृष्ठ एसईओ सर्वश्रेष्ठ अभ्यासहरू २०१ 2013: खेलका R नियमहरू Martech Zone
२०१-मा अन-पृष्ठ एसईओ सर्वश्रेष्ठ अभ्यासहरू: खेलका R नियमहरू
बिहीबार, फेब्रुअरी 14, 2013 बिहीबार, फेब्रुअरी 14, 2013 जेसन डीएमर्स
अहिले, म निश्चित छु कि तपाईंले जीवनभरि रहनको लागि पृष्ठमा अप्टिमाइजेसनको बारेमा पर्याप्त कुरा सुन्नुभयो। म उही मन्त्रहरू दोहोर्याउन चाहन्न जुन तपाईं गत वर्षदेखि सुन्नुभयो। हो, पृष्ठमा एसईओ अधिक महत्त्वपूर्ण भएको छ (म यो समय सायद याद गर्न सक्दिन कि यो कहिले भएको थिएन), र हो, पृष्ठमा एसईओ गुगल SERPs मा उच्च स्तर मा तपाईंको संभावना बनाउन वा तोक्न सक्छ। तर के परिवर्तन भएको छ हामीले हेर्ने र अन-पृष्ठ SEO मा व्यवहार गर्ने तरिका हो।
धेरै एसईओहरू पृष्ठको अनुकूलन कोडको खास विशिष्ट टेक्निकल बाढीको रूपमा सोच्न थाल्छन्। तपाईलाई ड्रिल थाहा छ: मेटा ट्यागहरू, क्यानोनिकल यूआरएलहरू, एएलटी ट्यागहरू, उचित ईन्कोडिing, राम्रोसँग क्राफ्ट गरिएको, चरित्र-सीमा-पालन गर्ने शीर्षक ट्यागहरू, इत्यादि।
ती आधारभूत हुन्। र यस बिन्दुमा तिनीहरू धेरै पुरानो-स्कूल हुन्। तिनीहरू पृष्ठमा एसईओ चेकलिस्टमा देखा पर्न जारी राख्छन्, तर तपाईं र मलाई थाहा छ कि एसईओको सम्पूर्ण डेमोग्राफी व्यापक रूपमा परिवर्तन भएको छ, यद्यपि आधारभूत आधार भने उस्तै नै रहेको छ। त्यो परिवर्तनको कारण, तपाईले अन-पृष्ठ SEO लाई हेर्ने तरिकाले पनि समायोजित गर्नुपर्दछ। त्यो हामी अब हेर्न जाँदैछौं के हो।
पृष्ठ एसईओ मा: फाउन्डेसन
यदि तपाईंको वेबसाइटमा पृष्ठमा राम्रोसँग अप्टिमाइज गरिएको छैन भने, तपाईंको वेबसाइट (लिंक निर्माण, सामग्री मार्केटि,, सामाजिक मिडिया) बाहिर प्रयासहरू सायद पर्याप्त परिणाम दिँदैन। त्यस्तो होइन कि त्यसले केही पनि उत्पन्न गर्दैन, तर तपाईंको आधा भन्दा बढि प्रयासहरू नालीमा पुग्न सक्छ।
त्यहाँ कुनै स्पष्ट नियम पुस्तक छैन कि भन्छन्: X, Y, र Z लाई अन-पेज अनुकूलनमा र तपाईंको श्रेणी A, B, वा C द्वारा बढ्नेछ। पृष्ठमा अप्टिमाइजेसन परीक्षणमा आधारित छ, विश्लेषण र त्रुटिहरू। तपाईले यसको बारेमा बढि जान्नको लागि केबाट काम गर्दैन भनेर पत्ता लगाएर।
तर सबै चीजहरूको दिमागमा राख्नुपर्ने, त्यहाँ यो छ: यदि तपाईंले आफ्नो अन-पृष्ठ एसईओको ख्याल राख्नुभएन भने, तपाईं झर्नुहुनेछ वा पछाडि रहनुहुनेछ: श्रेणीकरणमा, रूपान्तरणहरूमा, र आरओआईमा।
तर पहिले यसलाई सफा गरौं: पृष्ठमा SEO को बारेमा किन झगडा? सबै पछि, त्यहाँ यसको सामग्रीहरू को एक टन पहिले नै उपलब्ध छ। धेरै विशेषज्ञहरु यसको बारेमा राम्रो लेखेका छन्।
खोज इन्जीन एल्गोरिदमको बदलिएको डेमोग्राफिको कारणले SEO कसरी छनौट गर्ने भन्ने कुरामा कारकहरू परिवर्तन भएको छ। तपाईले लामो समय सम्म कुञ्जी शब्द र भित्री लि links्कका बारे सोच्न सक्नुहुन्न। त्यस्तै, तपाईं अब मेटा र ALT ट्यागहरूको सर्तमा सोच्न सक्नुहुन्न (हो, यसले शीर्षक ट्याग पनि समावेश गर्दछ)।
अन-पृष्ठ एसईओ तपाईंको साइटको कोडिंग कसरी गरिन्छ भनेर मात्र होईन। यो पनि तपाईंको साइट बेयर हड्डीहरू (रोबोट दृश्य) कस्तो देखिन्छ, र तपाईंको वेबसाइट कसरी विभिन्न स्क्रीनहरूमा प्रतिक्रिया गर्दछ भन्ने बारेमा पनि छ। यसले लोड समय र अधिकार समावेश गर्दछ। र Google मा २०१ 2013 मा र यस भन्दा पछाडिको नेतृत्वमा रहेको दिशासँग, यो स्पष्ट छ कि अन-पेज एलिमेन्टहरू र अफ-पृष्ठ एलिमेन्टहरू एक अर्कोसँग प्राकृतिक, स्पष्ट, जैविक ढ manner्गले लाइन गर्न अनि सहमत हुनुपर्दछ। त्यसकारण हामीले थोरै सावधानीका साथ पृष्ठ एसईओको पुनर्मूल्यांकन गर्नु पर्छ।
१. मेटा ट्यागहरू केवल शुरुआत मात्र हो
हामी उनीहरूको आगमनदेखि नै मेटा ट्यागहरू ज्ञात र प्रयोग गरेका छौं। मेटा "कीवर्ड" ट्याग लामो समयदेखि चलिरहेको छ, एसईओ रैंकिंग कारकको रूपमा, तर धेरै तातो उत्पन्न गरिएको छ एसईओ पोइन्ट-दृश्यबाट मेटा विवरण ट्यागको उपयोगिताको बारेमा।
एसईओ र्याकिंग कारकहरू भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण, यो तथ्य हो कि मेटा विवरण ट्यागहरूले तपाइँको वेबसाइटले कसरी खोज परिणामहरूमा प्रदर्शित हुने प्रभाव पार्ने अवसर प्रदान गर्दछ। एक महान मेटा विवरण ट्याग आफ्नो परिणाम मान्छे रैंकिंग अघि क्लिक प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो किवर्डहरू प्रयोग गर्न अझै राम्रो अभ्यास हो जब तपाईं भौगोलिक पहिचानकर्ताको साथ (जब लागू हुन्छ) साथ सक्नुहुनेछ, तर सबैभन्दा पहिला मानिसबाट क्लिकहरू आकर्षित गर्ने उद्देश्य हुनुपर्दछ।
२. क्यानोनिकल, डुप्लिकेट, टुटेका लिंकहरू, आदि।
गुगलका रोबोटहरू एकदम स्मार्ट भएका छन्, जहाँ टुटेका लिंकहरू र नक्कल पृष्ठहरूले बुलेट भन्दा छिटो रातो झण्डा खडा गर्दछ। ठ्याक्कै किन यो छ कि तपाईंले प्रमाणिक लिंकहरू (र उनीहरूको सम्बन्धित कोडहरू) अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पाउनुहुनेछ।
टूटेका लिंक र डुप्स एन्टि एसइओ मात्र होईन। तिनीहरू पनि एन्टी-प्रयोगकर्ता हुन्। तपाईको पहिलो प्रतिक्रिया के हो जब तपाई लिंकमा क्लिक गर्नुहुन्छ जुन केवल पृष्ठ त्रुटि देखाउँदछ?
The. रोबोटको दृष्टिकोण
पाठ आज पनि कुनै पनि वेबसाइटको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अंश रहन्छ। जबकि Google ले केडीई केहि भिडियोहरू र मिडियालाई केहि वर्गीकरण गर्दछ अरूलाई भन्दा कुञ्जी किवर्डहरूको लागि, राम्रो ढाँचाबद्ध र सामग्री-समृद्ध वेबसाइटहरूले अझै पनि रोस्टमा शासन गर्छन्।
तपाइँको वेबसाइटले कसरी क्र्रालरहरूमा हेर्ने दृष्टिकोण प्राप्त गर्न, तपाइँ जाभास्क्रिप्ट र छविहरू असक्षम गर्न सक्नुहुनेछ (तपाईंको ब्राउजरको प्राथमिकता / सेटिंग्स अन्तर्गत) र परिणाम पृष्ठमा हेर्नुहोस्।
जे होस् पूर्ण रूपमा सत्य होईन, परिणाम तपाईको वेबसाइटले क्रलरलाई कस्तो ठान्छ भनेर धेरै राम्रो हुन्छ। अब, निम्नलिखित चेकलिस्टमा सबै आईटमहरू प्रमाणित गर्नुहोस्:
के तपाइँको लोगो पाठको रूपमा देखाईरहेको छ?
के नेभिगेसन सही ढ working्गले काम गरिरहेको छ? के यो फुट्छ?
के तपाईंको पृष्ठको मुख्य सामग्री नेभिगेशन पछि देखाईरहेको छ?
के त्यहाँ कुनै लुकेका तत्वहरू छन् जुन जे एस अक्षम भएपछि देखा पर्दछ?
के सामग्री सही ढाँचामा छ?
के पृष्ठका सबै अन्य टुक्राहरू (विज्ञापन, ब्यानर छविहरू, साइन-अप फारमहरू, लिंकहरू, आदि) मुख्य सामग्री पछि देखाईदै छन्?
आधारभूत विचार भनेको मुख्य सामग्री (तपाईले गुगल नोट गर्न चाहानुहुने भाग) यथासक्दो चाँडो सान्दर्भिक शीर्षकहरू र वर्णनको साथ ठाउँमा आउँदछ भन्ने कुरा निश्चित गर्नु हो।
Time. समय औसत र आकार लोड गर्नुहोस्
गुगलले पृष्ठहरूको आकार र औसत लोड समयलाई लामो नोट गर्‍यो। यो ज्यादातर गणना द्वारा स्तर निर्धारण एल्गोरिथ्ममा जान्छ र SERPs मा तपाईंको स्थितिलाई असर गर्छ। यसको मतलब तपाइँको वेबसाइटमा तपाइँसँग राम्रो सामग्री हुन सक्छ, तर यदि पृष्ठहरू बिस्तारै लोड हुन्छन् भने, गुगल तपाईंलाई अन्य वेबसाईटहरू भन्दा छिटो लोड गर्ने क्रममा सावधानी अपनाउन गइरहेको छ।
गुगल सबै उपयोगकर्ता सन्तुष्टि को लागी हो। तिनीहरू आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूलाई सान्दर्भिक परिणामहरू देखाउन चाहन्छन् जुन सजीलो पहुँचयोग्य हुन्छ। यदि तपाईंसँग जाभास्क्रिप्ट स्निपेट्स, विजेटहरू, र अन्य तत्त्वहरू छन् जुन लोड समयलाई ढिला बनाउँदछ, गुगलले तपाईंलाई उच्च रैंकिंग प्रदान गर्ने छैन।
Think. मोबाइल सोच्नुहोस्, उत्तरदायी सोच्नुहोस्
आज अनलाइन मार्केटिंगमा यो सब भन्दा चर्चित छलफल भएका विषयहरू मध्ये एक हो। मोबाइल विज्ञापन र स्थानीय खोजीबाट डेस्कटप / ट्याब्लेट खपतमा बजार प्रवृत्ति सम्म, यो स्पष्ट छ कि एक तिर लाग्ने मोबाइल अनुकूलित साइट भविष्यको लहर हो।
जब तपाईं एक मोबाइल / उत्तरदायी वेबसाइट को लागी सोच्नुहुन्छ, तपाईं कसरी यसको बारेमा जान्छन्? CSS मिडिया क्वेरीहरू जस्तै उत्तरदायी, वा पूर्ण रूपमा नयाँ डोमेनहरू जस्तै "m.domain.com"? पूर्वको सिफारिस अक्सर गरिन्छ किनकि यसले चीजहरूलाई समान डोमेनमा राख्दछ (लि link्क जुस, कुनै डुप्लिकेसन, आदि)। यसले चीजहरू सरल राख्छ।
Authority. अधिकार र लेखक
लेखक-मेटा Google लाई प्रचार गर्दै जीवनमा नयाँ लीज प्राप्त गर्दछ लेखक श्रेणी मेट्रिक यो अब भन्दा अलि जटिल छ, तथापि। तपाईंले आफ्नो वेबसाइटको लागि रिच स्निपेट सक्षम गर्नुपर्नेछ, तपाईंको गुगल + प्रोफाइल भरिएको निश्चित गर्नुहोस्, र तिनीहरूलाई तपाईंको ब्लग / वेबसाइटको साथ लिंक गर्नुहोस्। AuthorRank एक महत्त्वपूर्ण र मूर्त मेट्रिकको रूपमा देखा परेको छ जुन पृष्ठ रैंकलाई असर गर्दछ, र यो पृष्ठमा एसईओ रणनीतिहरू मध्ये एक हो जुन तपाईंले निश्चित रूपमा गर्नुपर्दछ। न केवल यसले तपाईंको स्तर निर्धारण गर्दछ, तर यसले तपाईंको क्लिक-थ्रु दर SERPs मा पनि सुधार गर्दछ।
Design. डिजाईन तपाईको सूचीमा अन्तिम चीज हुनु हुँदैन
विडंबनाको कुरा, मैले यस बारेमा अन्तिम चीजको रूपमा लेख्नुपर्‍यो किनभने धेरै व्यक्तिहरूले उनीहरूले एउटा लेखमा पढेका अन्तिम चीजहरू मात्र याद गर्छन्। हार्डकोर एसईओ व्यक्ति नियमित रूपमा डिजाईनको महत्त्वलाई वेवास्ता गर्छन्।
वेबसाइटको डिजाइनबाट सीधा सौंदर्यशास्त्र र पढ्न योग्यता स्टेम। वेबसाइटहरूमा "फोल्डको माथि" के देखिन्छ भनेर पत्ता लगाउन गुगल राम्रो छ, र गुगलले स्पष्ट रूपमा सिफारिश गर्दछ कि तपाईं सामग्रीलाई फोल्डरको माथि राख्नुहोला ताकि तपाईंको पाठकहरू विज्ञापनको सट्टा सूचनालाई व्यवहार गर्ने।
अन-पृष्ठ SEO केवल मेटा कोड र क्यानोनिकल यूआरएलको बारेमा मात्र हैन। यो तपाइँको वेबसाइट कसरी प्रयोगकर्ता र रोबोटसँग जोड्दछ भनेर छ। यो तपाइँ कसरी तपाइँको वेबसाइट पहुँचयोग्य र पढ्न योग्य हुनुहुन्छ भनेर निश्चित गर्नुहुन्छ, र अझै पनि खोज इञ्जिनहरू सजिलैसँग लिनको लागि हुड अन्तर्गत पर्याप्त जानकारी छ।
टैग: पृष्ठमा एसईओसाइटमा एसईओअनसाइट एसईओखोज इन्जिन अनुकूलनएसईओ
एपीई: लेखक, प्रकाशक, उद्यमी
बिक्री सक्षमता सुझावहरू
त्यसोभए यस्तो देखिन्छ कि वास्तविक अन-पेज एसईओ उत्तम अभ्यासहरू वास्तवमै पृष्ठमा उत्कृष्ट मार्केटिंग अभ्यासहरू हुन् जसमा क्रलरको लागि केही अपवादहरू छन्। महान पोस्ट।
फेब्रुअरी २,, २०२० १०::16। बिहान
राम्रो पोष्ट तर यसमा कुनै नयाँ कुरा भेटिएन !!
मार्क्स 1, 2013 मा 2: 26 PM
धन्यवाद जेसन बहुमूल्य लेख लेख्न।
मार्क्स 19, 2013 मा 3: 02 PM
सुझावहरूको लागि धन्यवाद जे, तपाईंले मलाई SEO खेलमा अद्यावधिक राख्दै हुनुहुन्छ।
अप्रिल 5, 2013 मा 12: 10 PM
म नेतृत्व जेन को लागी SEO रणनीति को बारे मा हाम्रो टीम को एक प्रस्तुतीकरण दिन जाँदैछु र यो धेरै उपयोगी थियो। धन्यवाद! शुक्रबार शुभ रहोस।
अप्रिल 5, 2013 मा 1: 07 PM
अप्रिल 9, 2013 मा 12: 49 PM
राम्रो ब्लग यस्तो राम्रो जानकारी ....
अप्रिल 23, 2013 मा 9: 35 PM
डमीहरूको लागि मेरो एसईओमा फिर्ता जानु पर्छ
अप्रिल 24, 2013 मा 8: 59 एएम
Jayson – हाम्रो साइट प्रयोगकर्ता-उत्पन्न सामग्री। हामी प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको सामग्री मेटाउन पनि अनुमति दिन्छौं। यदि टुटेको लिङ्कहरूले हाम्रो एसईओ रैंकिंगलाई असर गर्छ भने, प्रयोगकर्ताले खोज इन्जिनलाई अनुक्रमणिका गरेपछि सामग्रीको टुक्रा हटाउने निर्णय गर्न सक्छ भन्ने तथ्यलाई कसरी बुझ्न सक्छु?
मई 3, 2013 मा 2: 43 एएम
राम्रो पोस्ट जेसन, साझेदारीको लागि धन्यवाद you के तपाईं मेटा-ट्यागहरूको लागि उत्तम अभ्यासहरूको सिफारिश गर्न सक्नुहुन्छ?
मई 3, 2013 मा 8: 10 एएम
मेटा विवरणहरू खोज इन्जिन प्रयोगकर्ताहरूलाई क्लिक गर्न लोभ्याउनको लागि महत्त्वपूर्ण छन्, सधैं एक आकर्षक मेटा विवरण ट्याग छ। मेटा कुञ्जी शब्दहरू ट्याग खोज इन्जिनहरू द्वारा बेवास्ता गरिन्छन् तर केही एनालिटिक्स एपहरूले तिनीहरूलाई प्रयोग गर्छन्। भौगोलिक मेटा ट्यागहरूले धेरै प्रतिज्ञा देखाएको छैन, तर म तिनीहरूलाई कुनै पनि स्थानीयकृत डाटासँग थप्नेछु। के यसले मद्दत गर्छ?
मई 3, 2013 मा 10: 06 एएम
नमस्ते डगलस, फलोअपको लागि धन्यवाद: तपाईको सल्लाह पाउनु राम्रो छ! केही मानिसहरूले हामीलाई भन्नुभयो कि हाम्रो SEO ट्यागहरू राम्रो छैनन्, र म मद्दतको लागि पेशेवरहरूमा फर्कें 🙂 यसले मद्दत गर्दछ! शीर्षकको लम्बाइ कस्तो हुनुपर्छ?
मई 3, 2013 मा 10: 28 एएम
पक्का - शीर्षक 70 वर्णहरू भन्दा कम हुनुपर्छ। यस ब्लगमा "कसरी अप्टिमाइज गर्ने" को लागी खोजी गर्नुहोस् र हामीसँग केहि साँच्चै राम्रो चरण-दर-चरण निर्देशनहरू छन्!
मई 15, 2013 मा 3: 27 एएम
यो लेख उपयोगी छ। मैले तिनीहरूलाई मेरो साइटमा लागू गरेको छु। मेरो साइट लोड समय 88 हो। सबै ट्यागहरू र js सावधानीपूर्वक लागू गरियो, तर मेरो साइट रैंक मात्र2हो। म कसरी मेरो साइटको लागि उच्च श्रेणी बनाउन सक्छु भन्ने कुनै सुझाव छ।
मई 21, 2013 मा 12: 56 PM
म भर्खरै 'फोल्ड सामग्री माथि' को बारेमा धेरै सल्लाह पढिरहेको छु। के यसको मतलब यो हो कि हामीले त्यहाँ देख्ने विशिष्ट टेम्प्लेट/विषयवस्तु डिजाइन - माथिको विशाल छवि स्लाइडर, तल 3-4 सामग्री ब्लकहरू, र तलको शरीर सामग्री - त्यो सल्लाहसँग प्रत्यक्ष विरोधमा छ?
मई 21, 2013 मा 1: 05 PM
@google-323434ee3d2d39bcbda81f3065830816: disqus इन्टरनेटमा धेरै राम्रो रूपान्तरण पृष्ठहरू धेरै लामो छन्, लामो प्रतिलिपि, प्रशंसापत्र, समीक्षा र उत्पादन विवरणहरू सहित। "अबोभ द फोल्ड" ले सामान्यतया औसतमा धेरै क्लिकहरू तान्न जारी राख्छ, तर प्रयोगकर्ताहरूलाई स्क्रोलिङ गर्न प्रयोग गरिन्छ र यसमा कुनै आपत्ति छैन। म परीक्षणको छेउमा गल्ती गर्नेछु र मैले सबै कुरालाई छोटो साइट बनाउनु अघि हेर्नुहोस्।
मई 21, 2013 मा 1: 20 PM
धन्यवाद @douglaskarr:disqus .. तपाईं प्रयोगकर्ता-अनुभव र CTR को बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, तर मलाई यो (र अन्य) लेखहरूमा चिन्तित के छ, यो विचार हो कि, "गुगलले "फोल्ड माथि" के देखाउँछ भनेर पत्ता लगाउन राम्रो छ। वेबसाइटहरू "। यसले मलाई आश्चर्यचकित बनाउँछ कि ux/रूपान्तरण पक्षमा राम्रो प्रदर्शन गर्ने साइटलाई पनि कुनै तरिकामा सजाय दिइन्छ। यसमा कुनै विचार छ वा म यसलाई गलत पढिरहेको छु?
मई 21, 2013 मा 1: 24 PM
म Google बनाम प्रयोगकर्ता अनुभवलाई कहिल्यै पूर्वनिर्धारित गर्दिन। वास्तवमा, म तर्क गर्छु कि उथले पृष्ठ सामग्री भएका साइटहरू प्रायः श्रेणीकरण गर्न गाह्रो हुन्छ। हाम्रा ग्राहकहरूले धेरै राम्रो परिणामहरू देख्छन् जब तिनीहरूसँग 'गाढा' सामग्री हुन्छ। यदि तपाइँका प्रयोगकर्ताहरूले तपाइँको सामग्री मन पराउँछन् भने, Google ले तपाइँको सामग्रीलाई माया गर्नेछ!
जुन 21, 2013 बिहान 3:06 बजे
राम्रो। धनी स्निपेट र लेखक रैंकको महत्त्वको बारेमा मलाई सम्झना गराउन धन्यबाद।
AINiT CS कराँची
खोज इन्जिनहरूमा उच्च श्रेणीकरण गर्न सान्दर्भिक र नवीनतम उत्तम एसईओ अभ्यास प्रदान गर्न तपाईंले यस लेखमा राख्नुभएको प्रयासको म प्रशंसा गर्दछु। यस्ता महत्त्वपूर्ण खोज श्रेणी कारकहरूलाई बेवास्ता गर्दा मेटा ट्यागहरू, पृष्ठ शीर्षक र कुञ्जी शव्दहरू इत्यादिमा मात्र जोड दिने भएकाले यी प्रायः हेरिएका बिन्दुहरू हुन्। धन्यवाद।